Ngabe Izikhangiso Zakho Zevidiyo Ziyabonakala? | Martech Zone
Okungaphezu kwengxenye yazo zonke izikhangiso emakhasini evidiyo kubonakala kuyo yonke iwebhu, isimo esinzima kubakhangisi abanethemba lokusebenzisa ithuba lokubukwa kwamavidiyo okukhulayo kuwo wonke amadivayisi. Akuzona zonke izindaba ezimbi… ngisho nomkhangiso wevidiyo olalelwe kancane ube nomthelela. AbakwaGoogle bahlaziye izinkundla zabo zokukhangisa ze-DoubleClick, Google kanye ne-Youtube ukuzama ukubona izinto ezisiza ukunquma ukubukeka kwalezo zikhangiso zamavidiyo.
Yini ebala njengokubukekayo?
Isikhangiso sevidiyo siyabukeka uma okungenani ama-50% wamaphikseli wesikhangiso abonakala esikrinini okungenani imizuzwana emibili elandelanayo, njengoba kuchazwe yiMedia Rating Council (MRC), ngokuhlangana ne-Interactive Advertising Bureau.
Izici ezinomthelela ekubukekeni zifaka isimilo sabathengi, idivayisi, izakhiwo zekhasi, usayizi wesidlali, kanye nokuma kwesikhangiso ekhasini. Buka i-Google's umbiko ogcwele wocwaningo lokho kukhuthaze le infographic. Kubandakanya ukuthi kungani kwenziwa ucwaningo, indlela yokusebenza, ukubukwa kwezwe, nemininingwane eminingi ngokutholakele.
Tags: Google +IABI-Interactive Advertising BureauUmkhandlu Wokulinganiswa KwemidiyaI-MRCukubukwa kwesikhangiso sevidiyoizikhangiso zevidiyoyoutubeizikhangiso ze-youtube
May 29, 2015 ku-2: 05 PM
Kuhle kakhulu! I-infographic yakho ifingqa kahle umbiko wokuqala we-google. Ngifuna ukwazi ukuthi iyiphi inkampani ye-infographic osebenze nayo?
May 31, 2015 ku-1: 49 AM
Gautam, le infographic yenziwe ngaphakathi yiGoogle. Noma kunjalo, DK New Media yenza ama-infographics amnandi. Ngazise uma ungathanda imininingwane ethile.